MARTISOOR: Madaxweyne Gaas fkf Musharrax Gaas 2013 iyo Martisoor Daljir (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 27, 2018 1:33 b 0
Puntland waxa ay isu diyaarinaysaa doorasho aan dadku ku qanacsanayn, saluugmada faraha badanna waxaa sal u ah in 20 sano aasaaskii Puntland kaddib doorashada lagu galayo habkii qabaliga ahaa ee lagu bilaabay. Intaas kaliya ma aha ee arrimaha ay bulshadu saluugmada ka muujinaysay wakhtigaas dheer waxaa kamid ah ammaanka, dhaqaalaha, garsoorka, xorriyadda hadalka, musuqa, xoreynta gobolada maqan, ku dhaqanka dastuurka iyo intoo kale.
Haddaba barnaamijka Martisoor waxaan asbuucan idiin ku soogudbineynaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo aan 5 sano kahor la yeelanay Madaxweynaha Puntland ee haatan talada haya, Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo xilligaas ahaa murashax u taagan xilka madaxtinimo ee uu hadda hayo.
Madaxweyne Gaas oo xilligaas ahaa murashax Gaas ayaa wareysigan waxa uu ku soo bandhigay waxa uu qaban doono haddii la doorto, waana la doortay. Haddaba maxaa u qabsoomay, maxaan u qabsoomin, maxaa se weli qabyo ah?
Hoos kaga bogo, oo fadlan nala qaybso fiiradaada iyo falcelisba.
Dhuusamareeb: Qandaraas dhisme Suuqa Dayax IRC – CONSTRUCTION OF DAYAH MARKET